2020-04-05 @ 00:06 in Ankapobeny
Ny fotoana tahaka izao no tena mety amiko. Voaangoko eto ampelatanako avokoa ny fahefana rehetra ahafahako mitazona azy. Afa-mampangina izay mitady hanohintohina ahy aho. Ataoko izay hamafana amin'ny fomba rehetra fa toa tsy ara-drariny ny naha-voafidy ahy. Raha esorina ireo "ambiroa" izay maro dia maro dia mihoatra noho ny elanelambato azoko manoloana ny mpifaninana amiko izany. Soa fa nisy izao toe-draharaha izao ahafahako mifehy tsara ny zavamisy.
Izaho rahateo manampahaizana manokana amin'ny fomba fampitan-kafatra ary efa nofiko hatry ny fahakely ny hitovy amin'ireny Kaisaran'i Roma fahiny ireny. Moa va tsy fahefana tsi-refesi-mandidy no ananan'i Kaisara? Ny hany olana fotsiny amin'ireny tantara ireny dia toa miasa dia miasa ny fifanampoizinana. Mila olona mahatoky ahy aho noho izany ho eo akaikiko mandrakariva, tsy maninona izay toetra ratsiny manoloana ny fiaraha-monina fa tombony lehibe ho ahy ny fananana azy tsy hivadika amiko na oviana na oviana rehefa omena kely sady mampidi-doza koa raha ahiliko tsy ho akaiky ahy.
Ny fotoana tahaka izao no tena mety amiko. Mody ampanantsoiko daholo ry ranona mbamin-dry ranona fa efa mazava ny kinendriko. Azo ve ilay vola any amin'ny mpampanjana-bola? Tsy maninona na vola hosamborina aza fa angaha moa izao no hamerina azy amin-dry zareo? Ny fihetsiketsehana tsy maintsy atao, sady haiko na ny mandihy na ny mihira... rehefa azo ny vola dia basy. Aiza no tsy hanome ahy ao anatin'izao sahotaka manerantany izao e? Zavatra efa niomanako ve tsy ho voafehiko? Tsy ilay voafehy araka ny eritreritry ny hafa fa voafehiko araka ny hamaritako azy. Dia hitolagaga ny maro, na dia ireo mpanohitra ahy aza, ka hifidy ahy indray amin'ny fifidianana manaraka...
Kanjo tapaka tampoka ilay redirediko te-ho filoha, eo am-piandrasana ny fepetra raisina ao anatin'izao fielezan'ny valan'aretina Covid-19 izao.